Home Wararka Milkiilihii Dowladda NN oo Hadda u Dadaal ugu Jiro inuu Milkiyo Golaha...
Milkiilihii Dowladda NN oo Hadda u Dadaal ugu Jiro inuu Milkiyo Golaha Shacbiga ee Soo Socda.
Cid waliba maanta waxay og tahay xanuunka, dhibaatada iyo Qaranjabka uu Fahad Yasiin u geystay dalka iyo dadka Somaliyeed kadiv markii uu hantiyey dowladda Maxmed Cabdullahi Farmajo afartii sano iyo barka soo jirtay.
Dilal qorsheysa sida, Ikran, General Galaal, afduubkii Mukhtar Roobow, dilalkii fashilmay ee madaxdweynayaashii hore, U dhiibistii cadow soo jireen ah muwadin Somaliyeed, weerarkii cabdiraxman Cabdishakuur iyo askartii lagu laayey gurigiisa oo kabahooda lagu duugay iyo muwadiniin NISA u badnaa oo dalkooda nafooda u hurayey oo la khaarijiyey waxay ahaayeen wixii dowladda NN Hogaankeeda iyo milkiilaheeda laga dhaxlay.
Waxaasa intaas ka daran in hadda Milkiilihii intaas oo dhibaato ah geystay uu maanta u taagan yahay in si xoog, xirfad iyo lacag ah kaga soo baxo doorashada HirShabeelle si uu ugu biiro golaha shacbiga, taas oo uu hadda wado qorshaheeda. Waxaa Baletweyne la geeyey baaburta aan Xabbad Karin si uu isaga u tago una isticmaalo, inkasta oo aan rabi ka baeryeyno inuu sii uu noo dhaafiyo ruuxaan nadhibay ee wali raba inuu na sii dhibo.
Waa maxaya Sababta uu Fahad Yasin u doonayo inuu ku soo biiro Glaha Shacbiga?
Inuu hanti golaha shacbiga oo uu isu sharraxo gudoonka Barlamanka, gacantana uu ku dhigo.
Inuu handado xildhibaanada, kana ururiyo siro uu la wadaago sirdoonka Qatar oo uu u shaqeeyo kadibna xildhibaan kasta uu noqdo la hayste aan xor iyo xildhibaan toona ahayne ah adeege Fahad iyo Qatar.
In uu isku darsado milkinta Goalaha Shacbiga iyo kan Dowladda oo xildhibaan walbaa uu noqdaa madiidin aysan jirin dhinac uu Qaranka, Qalbigiisa iyo Qur’aankii uu ku dhaartay ku shaqeyn kara.
Sidaas darted odayaasha wax soo xulaya ee ka soo jeeda jufada uu Rabo inu magacooda ijaafeeyo una abuuro colaad ay shacbiga Somaliyeed u qaadaan waxaa la gudboon beeshooda lagama waayin shakhsiyaad nadiif ah oo beelaha kale si Sharaf leh wax ula qeybsan kara ee ha u soo dirsadaan golaha shacbiga.
Dhinaca kale, shacbiga Somaliyeed maanta ayey u fududahay inay diidaan in golahooda shacbiga iyo dowladdiiba shakhsi ay yaqaannaan wixii dalkaan ku soo falay ay ogolaadaan inay gacanta u galaan isagoo isticmaalaya lacagta Qatar ay ugu talagshay inay Somaliya si dedban ugu gumeysato. Waxay arrini joogtaa ama maanta tasho ama berri ooy adigaa og inay labada mid uun xaajada ay noqoneyso.
Haddiise ay jirto cid u haysata in la dulminayo Fahad waxaa ku filan inay dhageysto wareysiga uu siiyey VOA Somali Mukhtar Roobow, taas oo ay ku caddahay cidda uu u shaqeeyo Fahad iyo qofka uu yahay shakhsiyan. Beesha reer Awxasan waxaa haboon inay dhegeystaan cabashooyinka tira beelka ah haaddii ay awood u leeyihiin, si aysan hadhow isu qaniinin beelaha kale ee ay oodwadaagta yihiin iyo guud ahaan qaranka Somaliyeed.